Ayikwazi ukulayisha nto
umbuzo Ayikwazi ukulayisha nto
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #488 by Penzoil3
Ababhalisileyo, lonke ukopisho zexesha lokuphuma. Ukopisho Free lonke ixesha ngaphandle. I azikhange zikwazi ukukhuphela nantoni kangangeenyanga!
Oku bleeping etyeni!
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #489 by Dariussssss
Kuba elide kangakanani na loo ngxaki?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #490 by Dariussssss
Ingaba unayo nayiphi na script ivalela into efakiweyo kumkhangeli zincwadii wakho?
Jonga uqhagamshelwano lwakho intanethi, oko kusenokuba yindlela olucothayo kakhulu oku.
Ndiyakwazi umxokozelo nantoni na ngaphandle nayiphi na ingxaki, ngoko ndiyaqikelela umba ngeenxa yakho.
Zama ukuba sinike ulwazi olubanzi.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #491 by Penzoil3
Njengokuba benditshilo iinyanga eziliqela. I attemptede ukuba uqhagamshelane RIKOOOO ngaphambili, bonke ndafumana yaba gee server yethu entle. amaxesha Yonke into phambi kokuba uyakwazi ukufumana umxokozelo, ezamahala okanye ilungu ukulanda zombini.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago - iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #492 by rikoooo
Xa FAQ yethu siye sachaza ukuba zokulanda zethu anikwe 8080 port endaweni uyezibuko 80. Ngoko ke, le ndlela simpliest ukwazi ukuba uthotho lwakho 8080 ivaliwe ngenxa firewall lwakho ukuzama ukulayisha into evela Simviation.com, kutheni? Ngenxa simviation usebenzise isibuko efanayo zokulanda zabo, ngoko ukuba ayisebenzi ne simviation kunye Rikoooo ngoko ke qiniseka 100%, firewall yakho ukuvala 8080 port. Kufuneka uvule izibuko 8080 TCP / UDP ngokudibanisa umthetho ibe firewall yakho.
Ke zonke dawunlowudi iza kusebenza kwi website yethu kunye nokuba kwezinye iiwebhusayithi ezininzi.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-1 inyanga edlulileyo rikoooo.
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #700 by Penzoil3
Ukuba nabani na owake wakhawula le ngxaki, xelela ukuba usethe kwakhona izicwangciso ze-firewall zazo ezizimele. Ingxaki yam yayizimele.